Mifanolana anatiny ny fianakaviana ampanjaka manoloana ny fananganana Mpanjakan’i Menabe. Nandefa taratasy any amin’ny lehiben’ny Distrika ny Printsy Kamamy Magloire, androany 19 aogositra 2019, milaza ny fanoherany marindrano ny fananganana Mpanjakan’i Menabe kasain’ny sasany ao anatin’ny fianakaviana hatao eo amin’ny Zomban’i Dady, ary milaza ny hametraka fitoriana mihitsy aza ny tenany. Ny ankilany indray efa mivonona ny hanatanteraka io lanonana fananganana Mpanjakan’i Menabe io, rahampitso talata 20 aogositra 2019, raha tsy misy fiovana amin’ny fotoana farany.
Mpizaika miisa 3 794 no efa nisoratra anarana ato amin'ny Faritra Menabe hiazo an’Antananarivo amin’ny famangiana Apostolika hataon'i Papa François eto Madagasikara ny 6 ka hatramin’ny 10 septambra 2019. Nisy ny fivoriana fanomanana natao teto Morondava, notarihin'ny Mompera Vikera niaraka tamin’ny Lehiben'ny Faritra sy ny Prefektiora, nanasana ny Mpitandro filaminana, ireo mpandraharaha ara-pitaterana, ny Kopetrativa fitaterana nasionaly sy rezionaly, ny avy amin’ny Fahasalamana, ny mpanao gazety, handaminana ny fitaterana ireo mpizaika ireo sy ny fandaminana amin'ny ankapobeny. (Jereo Sary Tohiny)
Hisy ny famelabelaran-kevitra hampisehoana ny zava-bita nandritra ny 60 taona, andraisan’ireo mpampianatra mpikaroka amin’ireo zanatsehatra 13 ao amin’ny FLSH anjara. Misy ny lalao ara-panatanjahantena ifaninanan’ireo sampam-pampianarana ao amin’ny FLSH. Hisy koa ny fampirantiana sy fifaninana isan-karazany ary fety aman-danonana karakarain’ny mpianatra, ary ho faranana amin’ny famoahana andiam-pianatra. Ireo dia voizina manodidina ny lohahevitra lehibe “Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l’ère du numérique » mandritra ny fankalazana. Efa tonga eo amin’ny ivon’ny fankalazana ny FLSH amin’izao fotoana. Ny famaranana dia hatao amin’ny volana martsa 2020. (Jereo sary Tohiny)
Notokanana androany teny amin'ny LA CITY Ivandry ny toerana hoan'ny haikanto sy ny kolontsaina malagasy, izay mitondra ny anarana hoe CITY AR'T. Tonga nanatontosa izany ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny alalan'ny ramatoa minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO sy Andriamatoa Danil Ismael, filoha mpanorina ny vondron'orinasa SMTP. (Jereo Sary Tohiny)
« Eid-al adha », « La grande fête », « Fête du sacrifice ». Andro manandanja ho an’ny mpino Silamo io. Nitontona 11 aogositra izy tamin’ity taona 2019 ity. Nankalaza izany ny mpino Silamo teto Ambatoboeny, izay notanterahina teo amin’ny Kianja Gabriel Razafintsalama. Taorian’ny vavaka dia nisy ny karnavaly, sorona, fifaninanana samihafa nataon'ireo mpianatry ny « madrassa » izay sekoly fandalinana Korany ary lalao baolina kitra. Fiaraha-mikorana sy fizarana loka ho an’ireo mpandresy no namarana ny fety. (Jereo Sary Tohiny)
Hisy ny seho izay atao eny amin'ny studio Arena ivandry ny zoma faha 9 aogositra manomboka amin'ny fito ora hariva. Marihina moa fa eo ambany fiahian'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ity fankalazana ity, ireto mpisehatra ireto moa dia andiany faha 3b izay mbola taranaky Jeannette no ankabeazan'ireo mpikambana ao. Ny fivarotana ny karatra moa dia ao amin'ny Aroptic Antanimena ka 50 000 ariary ny vidim-pidirana ho an'ny olon-tokana. (Jereo Sary Tohiny)
Notanterahana teny amin'ny café de la gare Soarano ny hetsika Tosik'art izay nokarakarain'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Ity hetsika ity moa dia natao hampiroboroboina ny kolontsaina malagasy tafiditra ao anatin'izany ny hira, dihy, ny asa tanana sy ny maro hafa. (Jereo Sary Tohiny)
Noraisin'ny Solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao Ikalamavony, Rtoa Raharimampionona, ireo mpianatra telo mirahalahy izay avy amin'ny Lycée Ikalamavony solontenan'ny DREN Matsiatra Ambony hiatrika ny fifaninanana "Rallye Scientifique" izay tontonsaina eto Antananarivo ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Anosy. Fifaninanana maro no tsy maintsy nandalovan'ireto mpianatra avy amin'ny Lycée Ikalamavony ireto izay nandraisan'ny ny Cisco rehetra anjara manerana ny Nosy.
Notolorana mari-boninahitra Officier de l’ordre des Arts, des lettres et de la culture i RABE DINA na i DJ DINA raha ny fahafantaran’ny be sy ny maro azy. Ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina no nikarakara ity fanolorana mari-boninahitra ity izay sambany teto amin’ny tantaran’ny firenena ny hoe mpikosoka kapila nahazo izany mari-boninahitra izany, ka ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Ramatoa Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy no nanolotra izany, izay natao teny amin’ny tranom-bokim-pirenena Anosy omaly zoma 26 jolay 2019.
Vita ny 95% ireo asa lehibe eny Soamandrakizay, Androhibe - Antananarivo hihaonan’i Papa Fransoa amin’ny mpino sy hanaovana ny sorona masina lehibe tarihiny amin’ny 8 septambra 2019. Ny fampitaovana sy fanorenana ny fotodrafitrasa handraisana ireo mpino 800 000 avy amin’ny lafy valon’ny Nosy, tombanana ho avy eny an-toerana. Nijery sy nanara-maso ny fivoaran’ny asa teny an-toerana ny filoha Andry Rajoelina niaraka tamin’ny Kardinaly Mgr Désiré Tsarahazana sy ny solontenan’i Vatican eto Madagasiakra, Mgr Paollo Rocco Gualteri androany maraina.